पर्यटकको पर्खाइमा रहेको मुगुम गाउँ राराताल अवलोकनपछि पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बनाउन सकिने स्थानीय च्यावा तामाङले बताए । ‘गाउँमा पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ, तर प्रचारप्रसारसहित सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘यो गाउँमा पुगी सकेपछि कहाँ बस्ने ? के खाने ? भन्ने कुनै चिन्ता हुदैन, गाउँमा आउने पर्यटक जसको घरमा पनि बसेर खान सक्छन् ।’
उनका अनुसार गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यस गाउँका कुनै पनि घरमा बास मागेर बस्ने वित्ताीकै सबैभन्दा पहिले भोटे चिया र नास्ताले पाहुनालाई स्वागत गर्ने परम्परागत चलन छ । पर्यटकलाई खान हिमाली सिस्नु, गुलियो फापरको ढिडो र रोटी, कोदोको थुक्पालगायत स्थानीय खाद्य परिकार सहजै उपलब्ध छ ।
२ दिन पैदल हिँडेर साँझ थकानका साथ गाउँ पुगेका जोकोही रातीको निन्द्रापछि बिहान उठ्दा गाउँको किनारमा बगिरहेको मुगु कर्णाली, च्वागारी, कोइकी र छाँयानाथ हिमाल, गाउँको माथिबाट खसेको झरनाको दृश्य देख्दा पूरै थकान मेटिएको महसुश गर्छन् । बुद्घको मूर्ति, करिब ८ सय वर्ष पुरानो बचन बोल्ने गुम्बालगायत धार्मीक तथा पर्यटकीयस्थल यस गाउँका आकर्षक स्थल हुन् ।
२ सय ९५ घरधुरी रहेको यस गाउँमा लामा समुदायको मात्र बसोबास छ । ९७ घरधुरी यहाँ बस्छन् । अन्य सबै जिल्ला सदरमुकाम गमगढी, जुम्ला र काठमाडौंको बौद्घमा बसोबास गर्दै आएका छन । यस गाउँ नजिकै यार्सा पाटन छ । गाउँमा सजिलै पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना भए पनि तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष कार्मा तामङका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार पर्यटन मन्त्रालयबाट गाउँपुग्ने पदमार्ग निमार्णका लागि १० लाख विनियोजन भएको छ । उक्त पदमार्गबाट सहजरूपले सेफोक्सुण्डो ताल पनि पुग्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा मुगुम गाउँको प्रचारप्रसारका लागि महोत्सव आयोजना गर्ने योजना छ । तर हालसम्म गाउँका युवाले आर्थिक समस्याका कारण गर्न सकेका छैनन् ।